NextMapping | Fanalahidy: Ny ho avin'ny fisarihana & fitandremana talenta farany
Ny ho avin'ny fisarihana & fitandremana talenta ambony
Ny 95% amin'ny orinasa nanadihady dia ny fitadiavana sy ny fihazonana ny talenta ambony indrindra amin'ny vanim-potoanan'ny robotika, mpiasa lavitra ary ny fifaninanana mihamitombo.
Ny fironana, ny fanadihadiana momba ny raharaha ary ny famoronana hevitra momba ny famerenana sy ny fihazonana ny talenta
Ny fanadihadiana nataon'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Fortune 500 dia nanambara fa na dia amin'ny halehiben'ny robotika aza izy ireo dia mikasa ny hanohy sy hitaky ireo olona manan-talenta amin'ny 2020 ary mihoatra ny tokony ho izy. Mitombo ny fifaninanana hisarihana talenta ambony, ary raha haingana ny olona karamaina sy manofana indostria hafa dia manakaiky sy manovo talenta. Ho fanampin'izany, ny fitomboan'ny safidy malalaka sy ny mpandraharaha amin'ny millennial dia ny fanaovana fikarohana ny talenta ary sarotra kokoa.
Inona no azon'ny orinasa atao? Inona no tokony hataon'ireo mpitarika handresena ny ady ho an'ny talenta?
Amin'ity fanadinadin-teny ity dia hianaranao ny fomba hametrahanao paikady sy drafitra momba ny fomba hisarihana ny talenta ambony sy ny fomba hihazonana azy ireo bebe kokoa noho ny fe-potoana isam-potoana.
Ny fikarohana farany momba ny indostria momba ny fironana amin'ny ho avy mahaliana
Ny fijerena ny zava-misy ankehitriny amin'ny fitadiavana sy ny fihazonana ny olona tsara ny stat ary ny fampiharana tsara indrindra
Hevitra manintona momba ny fitadiavana olona mety sahaza amin'ny indostrianareo
Hevitra sy ohatra momba ny famoronana avy amin'ny orinasa manerantany mandresy amin'ny ady ho an'ny talenta
Ny 'manintona' ambony folo amin'ireto talenta ambony ireto no te-hijery rehefa hiasa amin'ny orinasa iray
Ahoana ny fomba maha-orinasa iray 'manintona talentany', ao ny fananana mpitarika manova ny famolavolana sy ny fananganana kolontsaina izay mifantoka amin'ny fahaiza-mitarika
Ny antony iray dia mamela ny mpampiasa iray ny olona sy ny fomba fanamboarana azy
Ny fahatakarana bebe kokoa ny antony mahatonga ny fampiasam-bola amin'ny fandraisana mpiasa irery dia fomba tsy misy fandresena
Famaha-kevitra mamorona izay azonao apetraka avy hatrany mba hampitomboana ny fandresenao hisarihana ny talenta mahasarika anao
Cheryl Cran dia natolotry ny tarika Kaiser hafa niara-niasa taminy- ary izahay vao nanakarama azy ho toy ny Fampandrenesana Keynote fanidiana ny fivoriana fanao isan-taona - mety tsara izany! Ny hafatr'i Cheryl dia namboarina tanteraka tamin'ny orinasanay, ny mpihaino samihafa ary nohidiana tsara ny fihaonambenay.
Afaka nitaona votoaty avy tamin'ny singa hafa amin'ny fandaharana izy ary nifanaraka tamin'ny fanamby manokana natrehin'ny olona ao amin'ny ekipantsika ary manome hevitra manaitaitra. Ny foto-keviny sy ny zavatra niainany niaraka tamin'ny fahitana azy intuitive sy ny fanaterana mavitrika dia nanome aingam-panahy ny vondrona misy anay ary fomba mahavariana handrakofana ny fihaonantsika! ”
Tombontsoa ho an'ny mpiasa federaly VP